Snn Nepal रेम्डेसिभिर औषधिबारे सरकारको दोधारे नीति : सास्ती खेप्दै कोभिडका बिरामी – Snn Nepal
ललितपुर । ललितपुरका भूषण रत्न धाख्वा कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुने अवस्थामा पुगे । ३७ वर्षीय धाख्वालाई अवस्था बिग्रिदै गएपछि सानेपास्थित स्टार अस्पतालको आइसियुमा राखियो ।
कोरोनाको पहिलो लहरमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेम्डेसिभिर औषधिको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो ।
यसअघि अस्पताल भर्ना भएर रेम्डेसिभिर औषधि लिएका एक हजार ३४५ जनामा प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गरिएको जनस्वास्थ्यविद् डा. जनक कोइराला बताउँछन् । रेम्डेसिभिर नलिने र प्लाज्मा थेरापी नगरेका बिरामीको तुलनामा यो औषधि लिएका र प्लाज्मा थेरापी गरेका बिरामीको अस्पताल बसाई कम हुनुका साथै मृत्यु दर पनि कम पाइएको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।